Ahụike Medical Law Attorney Hanover horak Lawyers / Specialist Lawyers: Medical Law, Insurance Law, Onye Ọkachamara Iwu, Iwu Ahụike
horak. Ndị ọkàiwu - Iwu Iwu Ahụike
Onye ọka iwu maka Iwu Iwu Iwu Ahụike, Iwu Ahụike, Iwu Inye Iwu na Iwu Ahụike
Anyị na-enye ndụmọdụ ma na-anọchite anya ma ndị ọrịa ma ndị dọkịta, ụlọ ọgwụ ma ọ bụ mkpuchi metụtara. N'ezie, anyị na-ezere esemokwu nke mmasị, mana anyị maara nke ọma n'akụkụ niile. Nke a bụ uru maka gị na maka anyị, ebe ọ na-enyere anyị aka idozi nsogbu gị site na ọrụ anyị nwere na ụzọ mgbakwasị ụkwụ.
Anyị na-enye ndụmọdụ ma na-anọchite anya gị n'ọnọdụ ndị a:
Ogwu Ogwu / Mmebi Iwu: Na mmezi njezi, na-enweghị ncheta, na nje njehie, na ọgwụ na-ezighi ezi, wdg.
Ịgba akaebe na ichebe ihe akaebe: N'ihe gbasara ichebe ihe akaebe ma ọ bụ nchọpụta nke ahụike (akụkọ ahụike, nyocha nke ndekọ onye ọrịa)
Iwu Criminal banyere Ebube Ahụike: (ọrụ ndị omekome nke dọkịta ma ọ bụ ndị ọrụ ahụike metụtara ọrụ ahụike)
Asọpụrụ Iwu: Na-agbachitere na-ekwu ụgwọ nke dọkịta ma ọ bụ dọkịta na ndị ọzọ na ike akụrụngwa (n'ụlọ ọgwụ, ọpụrụiche n'ụlọ ọgwụ, na-agwọ ọrịa, ọzọ na nkà mmụta ọgwụ-iche, wdg)
Insurance Iwu: Insurance mkpuchi (mkpuchi onwe / iwu / agbakwunye / mkpuchi agbakwunyere) / mkpuchi ụlọ mkpọrọ
omume ezighi ezi
Iwu gbasara ndị dọkịta bụ usoro ọrụ ahụike pụrụ iche ma na-aghọwanye ihe dị mkpa nye ndị ọrịa. Ọrụ ọgwụ bụ isi obodo dọkịta na-arịa ọrịa ya ma ọ bụrụ na ọ kwụsịrị ọrụ nlekọta ya. Ọ bụrụ na dọkịta ahụ mehiere mgbe a na-agwọ ya, ọ bụ onye ọrịa.
Tupu ọgwụgwọ, dọkịta ahụ na-ejigide onye ọrịa ya mgbe ọ bụla ọ na-agwọ ọrịa, bụ nke dọkịta kwesịrị iji elekọta ya. Enweghị nkwenye nke onye ọrịa, dọkịta ahụ nwere ike ọ gaghị eme ọgwụgwọ ọ bụla. Ọ bụrụ na nkwenye ahụ adịghịzi, dọkịta ahụ na-eme ihe ọ bụla na-egbu ya ma bụrụ onye iwu n'okpuru iwu obodo maka mmejọ. Ya mere, dọkịta ahụ kwesịrị ịdabere na onye ahụ maka mmebi ahụ mebiri.
Kedu ihe mere ị ga-eji kwụọ onye ọka iwu ụgwọ maka ịgwọ ọrịa?
Ọ naghị adị mfe mgbe niile ịchọta ma chọpụta njehie. Na mgbakwunye na ị nweta ọkachamara n'ịgwọ ahụike, ikpe ahụ chọrọ ahụmahụ na ịmara nke onye ọka iwu. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ajụjụ gbasara ahụike ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na enwere ahụike ahụike gbasara iwu na iwu ikpe. Ibu nke ihe akaebe maka njehie nchoputa, njehie mmezi ma ọ bụ njehie ọgwụgwọ na-esonyere onye merụrụ ahụ n'ọtụtụ ikpe, ya mere nyocha nke iwu ahụ dị ezigbo mkpa. Na naanị onye ọkịkpe ọkachamara nwere ike ịrụ ọrụ nkwenye nke akwụ ụgwọ na ụgwọ akwụ ụgwọ.
Obi dị anyị ụtọ inye aka ma nye gị ndụmọdụ. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ga-achọ iji ọrụ anyị, biko egbula ịkpọtụrụ anyị
Your e-mail address (chọrọ)
Nọmba ekwentị gị
Biko kọwaa ikpe gị n'okpuru ebe a
Onye nwere ọrịa nwere ike ịrịọ ụlọ ọgwụ na-agwọ ọrịa ka o weghachite akwụkwọ niile
Onye nwere ike ịrịọ si n'ụlọ ọgwụ na - emeso ya - na - agaghị akwụghachi ụgwọ - na - edeghị akwụkwọ ọ bụla ọgwụgwọ. Otú ọ dị, aha na adreesị nke ndị dọkịta na-etinye aka na ọgwụgwọ ha aghaghị ịkọrọ ya n'ụlọ ọgwụ naanị ma ọ bụrụ na onye ahụ gosipụtara ezi mmasị na data ahụ. Nke ahụ bụ ihe 26 nwere. Ụlọikpe obodo nke Ụlọikpe Kasị Elu nke Hamm kpebiri na 14.07.2017, si otú a na-akwado ikpe ikpe mbụ nke Landgericht Bochum site na 27.07.2016 (Az. 6 O 9 / 16 LG Bochum).
N'ime enweghị inshọransị ahụ ike, onye ọrịa ahụ na-anọgide na-akwụ ụgwọ dịka §§ 10 ff BPflV
Nwere ụlọ ọgwụ ọrụ na onye ọrịa (na nke a nke a obere ọrịa nne), ndị nkịtị echiche ahụ a ọha ike mkpuchi na-esi ọnwụ na-iche na-eri nke ọgwụ na ọnụnọ, na-ewelite a dị ka a ndudue si, mgbe ahụ, na-efu ndị (n'agbata ụlọ ọgwụ na ikike na onye ọrịa ebe a na-emechi nne nke obere ọrịa) ọgwụgwọ nkwekọrịta azụmahịa ntọala. The nyere na-anọghị nke ndabere nke ukpụhọde nke n'etiti ọgwụ ụgbọelu na ọrịa (na nke a na nne na nna nke onye ọrịa) emechi ọgwụgwọ Treaty akpata ọgwụ ụgbọelu na-ekpebisi ike dị na §§ 10 iche BPflV akwụ ụgwọ maka General Hospital ọrụ (onye ọrịa nwere ike ịrịọ si nne nke onye ọrịa): ebe a. BGH, ikpe nke 28. April 2005 - III ZR 351 / 04 - OLG Koblen LG Koblenz.
Ichebe ikike nke onye ọrịa ahụ maka mkpebi onwe onye
Idebe ikike nke onye ahụ maka mkpebi onwe onye chọrọ ihe ọmụma gbasara nhọrọ nhazi ọzọ ma ọ bụrụ na ọnụọgụ ọgwụgwọ dị oke ọnụ maka ịba uru na ọgwụgwọ.
N'eziokwu, mkpesa ikpe nwere ibu ọrụ nke na-azara ọnụ Abasi ọdọhọ dokwuo anya eziokwu na abụọ ọgwụgwọ ọzọ nwere, otu onye nke bụ na oge a ọhụrụ ala usoro. The Court nke ghọtara Sineti oke nke Behandlungsmetho-de Ọ bụ ezie na isi ibu ọrụ nke onye dibịa (Sineti ikpe BGHZ 102, 17, 22, 106, 153, 157; si 11 May 1982 - VI ZR 171 / 80 - VersR 1982, 771. . 772; si 24 No-vember 1987 - VI ZR 65 / 87 - VersR 1988, 190, 191 na 15 March 2005 - VI ZR 313 / 03 - VersR 2005, 836 ;. OLG Zweibrücken, OLGR 2001, 79, 81 na nA-Mkpebi nke Panel nke 19 December 2000 - VI ZR 171 / 00 - ;. OLG Karlsruhe, MedR 2003, 229, 230).
Ma ichebe onye ọrịa ahụ onwe-mbo achọ ngosi nke onye ọzọ ọgwụgwọ mgbe multiple hà ọgwụgwọ nhọrọ dị maka a ọgwụ nzube na indexed ọgwụ dị na ga nwere dị iche iche ụdị ọrịa ma ọ bụ dị iche iche azụmahịa ize ndụ na ohere (Sineti ikpe BGHZ 102, 17 ., 22, 106, 153, 157; si 14 September 2004 - VI ZR 186 / 03 - VersR 2005, 227; si 15 March 2005 - VI ZR 313 / 03 - ibid ;. nwamba Meier, omume ezighi ezi, 2002, p 331 f .; ..... MünchKommBGB / Wagner, ed 4, § 823 Rn 707 f.; Staudinger / Hager, BGB, 13 nhazi  § 823, Rn m 92 n'ihu zoro).
Nyocha nke ndị akwụkwọ ọka ahụ na-ahụ maka ikpe gbasara ahụike
The ọzọ dị § 134 ABS site ndị ọzọ dị ka § 142 ZPO ma ọ bụ. 1 ZPO osụk mbụ akwụkwọ abụghị akụkụ nke ikpe ndia. Ntụle maka ịnweta faịlụ ma ọ bụ mbipụta nke mbipụta adịghị esite na § 299 ZPO. Maka akwụkwọ ndị dị na ụlọikpe ahụ. § 142 ZPO nwetara sitere na ndị ọzọ, e nwere a nri na amụba ma ọ dị ka na-edebe ụkpụrụ a ga-anụ ma na ndokwa nke §§ 131, 133 ZPO na analogous ngwa nke § 299 ZPO. 103 para 1 GG.
299 ZPO ekwughị n'ụzọ doro anya maka nnyefe nke faịlụ ikpe ahụ na ndị nnọchianya nke ndị ọzọ. Otú ọ dị, a pụrụ ime ka mbupụ ahụ bụrụ nke nwere ezi uche ma ọ bụrụ na faịlụ ndị a na-akwụ ụgwọ na onye anabatara bụ onye a pụrụ ịtụkwasị obi. Mkpebi ahụ aghaghị ịkwanyere ụkpụrụ nke ikike ị nụ.
The otu na-emetụta ndị osụk site ọzọ ma ọ bụ nsonye ka § 142 ZPO ọzọ asambodo na akwụkwọ mgbe onye n'etiti ikpe na mkpọrọ contracts na banyere, ekweta na eziga faịlụ ka mmadụ. Tupu ụlọ ikpe ahụ ajụ iziga ya, ọ ghaghị ibu ụzọ gwa onye nke atọ ma ha kwetara na ha ga-edefe akwụkwọ ndị ahụ na ndị nnọchianya nke abụọ ahụ.
ọkàiwu dọkịta omume ezighi ezi Medical liability azọrọ omume ezighi ezi Ezu omume ezighi ezi usoro omume ezighi ezi Arzthonorar ọgwụ iwu Nkwụsị dọkịta ekperima mmepeanya Nkpughe nke mebiri ngosi ọrụ geek usoro ọgwụgwọ ọdịda ọgwụgwọ nkwekọrịta BGH dọkịta na-awa mgbochi Ịgba ọsọ FolgeoperationPatientenrechte Goa liability ụlọ ọgwụ Mwakpo na ọnwụ Laborarzt ekwu ngalaba ndidi Patientenanwaltschaft ndidi Ozi ọrịa ikike ọkàiwu Regressabteilung Nchekwa n'ihe ize ndụ ngosi ọkachamara na uche akwụ ụgwọ emebi akwụ ụgwọ na-ekwu mmachi insurance igbu oge ndabere ikpe overacceleration
Ọrụ ị ga-agwa dọkịta naanị na-ahụ maka ihe ize ndụ ndị a maara n'oge a na-agwọ ọrịa.
Achọghị ndị na-ere ọgwụ na-ere ọgwụ ka ha kwụọ ụgwọ ọnụahịa kachasị maka ọgwụ ọgwụ
12A ApoG: Ọkachamara ọkachamara ọkachamara kwesịrị ịgba ọsọ na "ụlọ ahịa ọgwụ" ụlọ na-akwụghị ụgwọ ma nata ụgwọ ego maka mgbalị a na-azaghị
Ọgwụgwọ ọgwụgwọ nke onye na-agwọ ọrịa anụmanụ
Ọbụna na nkwekọrịta nkwekọrịta ntinye aka, ịkwụsị ụgwọ ụgwọ agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na a kwụsịla ọrụ ịwa ahụ
Enweghị onye na-ekwu banyere onye ọrịa ahụ megide onye ọrụ ụlọ ọgwụ na ịkọ ọkwa nke onye ọrụ akwụ ụgwọ
Ịgba ụta nke ihe akaebe maka imebi iwu ịkwalite ịtụrụ ime
Ibu na a nwere obere fatefully, nwere obere na-ezighị ezi omume kpatara ike na oge nke a ọmụmụ
Ngwọta ndị ọzọ
ahịa ọgwụ iwu
Medical ụgwọ iwu
oru nke ngosi
Birth ntụpọ iwu
Loss nke enwetakwa
Nhọrọ ọrụ nkwekọrịta
Ahụike Medical Lower Saxony
ndị ọkàiwu horak
North German ikpe mkpekọrịta ụlọ
Ndụmọdụ onye ọrịa nọọrọ onwe ya
Copyright © 2018 bei horak. Ndị ọkàiwu - Iwu Iwu Ahụike, Site na WordPress. Okwu: Mee ngwa ngwa ThemeGrill.